Baraf ka dhacay Saxaraha markii ugu horreysay muddo 39 sano ah | Saadaasha Shabakadda
Sawir - Zinnedine hashas
Caadi ahaan, markaan ka hadlayno barafka waxaan tixraacaynaa meelaha ay ka mid yihiin tiirarka ama, annaga oo aan u sii socon, meelaha sare ee jasiiradda Iberia. Laakiin, haddii ay horeba noogu ahayd wax la yaab leh inaynu u malayno in meel sida badda Mediterranean-ka ah ay ku waabariisan karaan muuqaalka cad, xitaa kuuma sheegayo waxaad ka fikirto haddii taasi ka dhacdo Saxaraha Saxaraha.
Sidoo kale. Mararka qaar waxaan ilaawnaa in waxyaabaha aan la qiyaasi karin ay sidoo kale run noqon karaan. Markan, kuwa nasiibka u helay ayaa deganaa Ain Sefra, Magaalo ay leedahay Aljeeriya oo aragtay sida ciidda liinta ah ee lamadegaanka loogu daboolay baraf cad.
Sawir - NASA Worldview
Taariikhdu waxay ahayd Axad, Janaayo 7, 2018. Adeegga saadaasha hawada ee Algeria ayaa soo saaray digniin baraf dhammaadka wiiggaas qaybta galbeed ee dalka, Feejignaan aan shaki ku jirin inay tahay inay soo jiidatay fiiro gaar ah dhammaan kuwii meesha joogay, si aan micno lahayn, maahan meel u nugul barafka. Si kastaba ha noqotee, Axadii ayaa ka run noqotay magaalada Ain Sefra, oo qiyaastii kun mitir ka sarreysa heerka badda oo celcelis ahaan heerkulka Janaayo uu yahay 12,4 darajo Celsius.
Halkaas kuma da'o roob badan: iyadoo celcelis ahaan roobku sanadkiiba yahay 169mm oo biyo ah mitirkiiba, waa dhif iyo naadir in barafka da'o. Laakiin sawirrada, oo uu qaaday Zinnadine Hashas, ​​oo ah sawir qaade maxalli ah, shaki ugama tagayo.
10 ilaa 15 sintimitir oo baraf ah ayaa da'ay iyada oo ay ugu wacan tahay hawo qabow oo socota oo ka timid Badda Dhexe. Tani ma dhicin tan iyo bishii Febraayo 1979, sidaa darteed waxay ahayd 39 sano tan iyo markii ay awood u yeesheen inay ku raaxeystaan ​​mid ka mid ah lamadegaanka ugu barafka diiran adduunka.
Sideed u aragtaa sawirradan? Xaqiiqdii waa inay ku raaxaysteen xilligan aad u badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Baraf ka dhacay Saxaraha markii ugu horreysay muddo 39 sano ah